qisadii asxaabul ukhtuut wax kabaro
Wednesday May 09, 2018 - 22:12:46 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
Waxa jiray amiir ama boqor u talin jiray meesha hadda loo yidhaahdo Najraan eegga ku suntan dhulka loo yiqaano Sacuudi Arabiya. Isagu waxa uu lahaa nin saaxir
Waxa jiray amiir ama boqor u talin jiray meesha hadda loo yidhaahdo Najraan eegga ku suntan dhulka loo yiqaano Sacuudi Arabiya. Isagu waxa uu lahaa nin saaxir ah oo ka caan ahaa aagaga iyo tuulada magaalada.Ayaan ayaamaha ka mida ayuu ninkii faaliyihaha ahaa ay da'diisu weynaanasaa isla jeerkiiba waxa uu raadinaya axad hawshiisa badala isagoona u bandhigaya boqorkiisa una sheegaya xaaladiisa”amiiroow da'day way waynaatay amintan la joogana geeridaydu way soo dhowaatay ee waxa aan rabaa inaad keento wiil yar oo si aan u baro sixirka” Boqorkii ayaa keenaya wiilkii yaraa ee caqliga badnaa, faaliyihii ayaa baraya sixirka. Hase ahaatee waxa jiray isna nin Raahib ahaa waana (wadaad haysta diintii nabi Ciise N.N.K.H) oo mowlac agtiisa ku lahaan jiray wadada uu sii maraayo wiilka kan yar. Inankii yaraa wuxuu iska ag fadhiistanayqq raahibkii, Inankii yaraa waxa cajab galisanasa hadalka raahibka waana uu u ka helayaa. Wiilkii markastoo aado dhanka faaliyaha ayuu garaacid Kala kulmayaaa isaga oo lagu canaan jiray meesha uu ku habsaamay,goortuu aado gurigana garaacid kale ayuu kala kulmi jiray lagunq odhan jiray xageed ku habsaantay? Kadibna wiilkii waxa uu u u bandhigaya raahibkii wax I saga haysta markuu faaliyaha u tagaayo iyo markuu gurigooga tagAstana. !!, dabadeedna Raahibkii ayaa ku odhanaya waxaad ku odhanaysaa faaliyaha markuu faaliyuhu ku waydiiyo xagaad ku habsaantay, waxa aan ku habsamay guriga, hadii ehelkaagu ku waydiiyana ku dheh, waxaan ku habsaamay saaxirka.
Maalintii danbe magaaladii waxa imanaya daabad weyn (Bahal weyn oo laga cabsanayey) waxa uu kala xidhanayqq waddadii. Wiilkii yaraa ayaa u qaadanaya isaga oo leh - ”Ilaahayoow hadii arrinka raahibka agtaada looga jacayl badan yahay arrinka saaxirka, dhagaxan yar KY dil bahalkan imiga I muuqda” kadib dhagaxii ayuu ku tuurayaa bahalkii ayuu dilayaa, dadkiina si sahala u marayaan wadadii.Wiilkii arrintii ayuu u sheegayaa Raahibkii, raahibkiina waxa uu ku odhanayaa:- Wiilyahaw adigaa maanta iga fiican waana lagu imtixaami doonaayee ee haysoo sheegin.
Wiilkii waxa uu Eebbe (SW) ka muujiyinayqa karaamooyin badan, waxa uu dawaynaa dadka uu hadalku ku dhaganyahay, dadka baraska u saaxiibka iyo cuddurada kale oo badan idinka eebbuun (SW) ayuna dawaynayaa. Wiilkii arrintiisu way faafasaa oo waxa gaadhsaa nin ka agdhowaa boqorka oo indho la,aa kadibna inta uu soo qaaday hadiyad badan ayuu ku odhanayaa wiilyahaw i dawee oo indhahaygii iisoo celi. Wiilkii waxa uu ugu warcelinayaa ”Anigu cidna ma daweeyo ee ilaahay ayaa wax daweeya, hadaadse rummayso waan kuu baryayaa inuu eebbe kuu soo celiyo indhahaagii. Kadibna wuu rumaynayaa.Eebana indhihiisuu usoo celinayaa Kadibna meeshii u boqorku fadhiisan jiray ayuu ku noqonayaa Boqorkii ayaa waydiinaya; Yaa kuusoo celiyey indhahaagii.? Ninkii waxa uu odhanayaa(Ilaahay). Boqorkii waxa ayaa uu ugu wercelinaya- Ma anniga kuusoo celiyey? Ninkii waxa uu odhanayaa May ee waxa iisoo celiyey Ilaahay iyo Ilaahaaga. Oo ma waxaad leedahay Rabbi aan anniga ahayn? Ninkii waxa uu ku odhanayaa- Haa oo waa Rabbigay iyo Rabbigaaga.
Ninkii waa la cadibayaa ilaa inta uu ka sheegayey wiilkii yaraa, wiilkiina waa la cadibayaa ilamaayo uu ka sheegayay Raahibkii. Kadib raahibkii ayaa lagu dhahayaa ka noqo diintaada, waanu diidayaa dabadeedna miishaar ayaa madaxa lagaga qabayqq waxaana loo kala jarayaa laba qaybood. Indhoolihiina sidoo kale waa lakala jarayaa Boqorkii waxa uu ku odhanayqa idankiisii; wiilkan geeya buur dusheed kadibna ku dhaha ka noqo diintaada, haduu diidana buurta ka tuura. Wiilkii waa la kaxaynaa oo la saarayaaa buur sare, markaasuu Eebe (SW) baryayayaa inuu ka kaafiyo, dabadeed buurti ayaa gariirasa oo waxa daadanaya ciidankii, wiilkiina boqorkii ayuu kusoo noqonayaa. Boqorkii waxa uu ku darayaaa ciidan kale oo uu ku odhanayaa geeya badda oo ka tuura doonta hadduu ka noqon waayo diinta. Waa la qaadayaa wiilkii saarayaa doontii, markii la geeyay baddii dhexdeeda ayuu Ilaahay baryeyaa inuu ka kaafiyo kuwan, Eebana waa ka kaafiyeyayaa kadibna waxa uu kusoo noqdanayqa boqorkii waxaanu ku odhanayaa;- ima dili karaysaysaan ilaa aad amarkayga fulisinasaan, waxaad isugu yeedhaa dadka oodhan kadibna intaad warankaygan qaadaan dheh (bismillaah rabbi qulaam) kadibna igu soo gan waranka markaasunbaan dhimanayaa. Boqorkii waxa uu iskugu yeedhay dadkii kadibna warankii ayuu ku ganay wiilkii waxaanu sameeye sidii la faray, Wiilkiina waa dhintay.
Dadkii oo dhan waxay dhaheen waxaan rumaynay Rabbiga wiilka yar. Boqorkii ayaa loo sheegayaa in wixii uu ka cabsanayey dhaceen, dadkii oo dhamina rumeeyeen Eebe (SW).Boqorkii waxa uu farayaa ciidankiisii inay qodaan godad kuna shidaan dab iyo holac kadibna ku tuuraan cidii diida inay ka noqoto diinta Islaamka. Kadib dadkii waxay u baratamayaam dhankii dabka oo isku tuurayaan godadkii naarta ahaa. Waxa jiray haweenay xanbaarsanayd ilmo yar kadibna waxay u cabsatay cunuga yar, markaasaa Eebe (SW) ka hadliyey ilmihii yaraa waxaanu yidhi ”Hooyoy, samir xaq ayaad ku taagantahay” Qisadan waxa Eebe (SW) ku xusay Quraanka, Suurada Buruuj